Ywar Thar Lay (YTU): 2/1/15
ကော့ကရိတ်၊ ဝပ်အာရွမ်၊ တရုတ်တန်း ဒုတိယနေ့
- On Saturday, 5th May 2012, we'll go to nonthaburi pier by taxi in the morning and go to koh kret by boat.
- After visit around in koh kret for about3hours (I guess), we'll go to either Wat Arun or Golden Mountain depend on where you wanna go first.
Wat Arun is convenient to go by boat when we're back from koh kret but if you like to see sunset at Wat Arun which is nice my pov, we can go to Golden Mountain first.
- End of Day Two.
ဒုတိယနေ့ အဖွဈ ကို့ကရကျလို့ မူရငျး အသံထှကျအတိုငျးဆိုနိုငျပမေယျ့ ကနြျောက ကော့ကရိတျလို့ပဲ မှတျထားလိုကျတယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ၂၀၀လောကျကတညျးက မှနျလူမြိုးတှေ အခွခေနြထေိုငျခဲ့တဲ့ နရောမို့လို့ ကော့ကရိတျ လို့မှတျထားတာ အသငျ့လြျောဆုံးပဲ မဟုတျလား။
ဘနျကောကျလို မွို့ကွီးပွကွီးမှာ မလညျပတျခငျြတဲ့ ကနြော့အတှကျ သူငယျခငျြးက ဒီနရောကို စီစဉျပေးထားတာပါ။ နှနျသဘူရီ ဆိပျကမျးကနေ ဖယျရီနဲ့ ကူးရတယျ။ ဖယျရီပျေါက ဆငျးတာနဲ့ မှနျဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ ဆိုငျးဘုတျကို မွငျနိုငျတယျ။
မုနျ့ဆိုငျတနျးလို စြေးတနျးတခုမှာ မုနျ့တှစေားလိုကျ၊ ဓါတျပုံရိုကျလိုကျ လြှောကျကွတယျ။
မုနျ့ဦးနှောကျနဲ့ ဆငျတယျ။ တပနျးကနျလောကျတော့ အသာလေးပေါ့။
ပှဲတျောတခုကငျြးပနတောတှလေို့ ကလေးတှေ ကနတောလေး အမှတျတရ ရိုကျယူလာခဲ့တယျ။
မွဈဟိုးတဖကျကမျးက ဘုရားကိုလညျး လှမျးဖူးခဲ့တယျ။
ဝပျပါရာမိုငျးဆိုတဲ့ ဘုရားတဆူကိုလညျး ဖူးခဲ့သေးတယျ။ ဘုရားပျေါမှာ ဆရာတျောတှနေဲ့ တှတေ့ော့ ဆရာတျောတှကေ မွနျမာတှလေားလို့ မေးပါတယျ။ ကိုယျ့လူမြိုးတှနေဲ့ နိုငျငံရပျခွားမှာ တှရေ့တာဟာ စိတျထဲ ပြျောစရာ အလှနျကောငျးတယျ မဟုတျလား။
ကော့ကရိတျက ပွနျတဲ့အခါ တျောတျောလေး နောကျကနြပွေီ။ Golden Mountain ကိုတကျဖို့ မမှီတော့ဘူး။ ဘုရားပျေါတကျတဲ့ လှခေါးကို ပိတျထားတာမို့ လမျးတဝကျကနေ လှညျ့ပွနျလာခဲ့တယျ။
ဝပျအာရှမျမှာလညျး ပိတျထားတဲ့ တံခါးကွီးက ဆီးကွိုတယျ။ သံတိုငျတှကွေားကနေ ကောငျးကငျပွာထဲက ဘုရားကို ဓါတျပုံရိုကျယူခဲ့ပါတယျ။
ဘယျမှလညျး သှားလို့မရတော့တဲ့နောကျ တရုတျတနျးမှာ ဗိုကျသှားဖွညျ့ကွတယျ။ ယိုးဒယားစကား ပွောတတျတဲ့သူပါတာ အတျောလေး အဆငျပွပေါတယျ။ ပငျလယျစာတှကေို စားတိုငျး ယိုးဒယားတှရေဲ့ အစပျအဟပျကို ဘယျနိုငျငံကမှ လိုကျမမှီတာ တှရေ့တယျ။
အပွနျ ကခနြဘူရီ ရထားလကျမှတျလညျး မရှိတော့ပါဘူး။ ပုံမှနျရထားလကျမှတျ နှဈစောငျဝယျပွီး နှဈယောကျသား အိမျပွနျလာကွတယျ။ ကခနြဘူရီသှားဖို့ မနကျစောစောထရဦးမယျ မဟုတျလား.....
ဘန်ကောက်၊ အယုဒ္ဓယ ပထမနေ့
၂၀၁၂ မလေထဲမှာ ဘနျကောကျက သူငယျခငျြးတယောကျ မွနျမာပွညျ အပွီးမပွနျခငျ ဘနျကောကျကို လာလညျဖို့ဖိတျတယျ။ မစှနျးရငျးကလညျးရှိ ကနျစှနျးခငျးကလညျး ငွိခငျြနတောနဲ့ လယောဉျလကျမှတျကို စလုံးသုံးရာကြျော ဘတျဂကျြအဲလိုငျးကနေ ဝယျလိုကျတယျ။ ဗီဇာကိစ်စ စီစဉျပွီးတဲ့အခါ သူငယျခငျြးကို အဆငျသငျ့ ဖွဈပွီလို့ အကွောငျးကွားတယျ။ သူငယျခငျြးက ခရီးစဉျကို အခုလို အသအေခြာ ဆှဲပေးထားပါတယျ။
- On Friday, 4th May 2012, you may arrive to my place ard 10:00 - 10:30 so take sometimes to refresh yourself.
- After that, I'll drop you at victory monument to catchavan to Ayudhya which is the last stop of that van service.
- You can hire Tuk-Tuk at the van gate to visit around the temples in Ayudhya. They have photos and you can pick which one to go. 3-4hrs would be enough for temple visits. 150-200THB per hour charges for tuk-tuk (that's what I paid last time though it's not very recent
- After the temple trip, ask the tuk-tuk driver to drop you at van gate to go to victory monument and get on the van and you'll be back to bkk
- If you wanna go to madame tussaud, you can go to Siam BTS station from victory monument BTS station which is in walking distance from the van gate you get off.
Once you arrived to Siam, go to Siam Paragon and you'll see ticket sales counter of madame tussaud, ticket costs 800sth THB and you can ask them how to go there in English.
- After that, I'll come pick you up there
- On the way, we'll go buy train ticket for River Kwai trip for Sunday.
- End of Day One.
သုဝဏ်ဏဘူမိလယောဉျကှငျးကနေ အမွနျရထားနဲ့ မွို့ထဲကို ကိုယျ့ဖာသာ လကျမှတျဝယျပွီး လာလိုကျတယျ။ လာကွိုမယျ့ သူငယျခငျြးက အိပျယာထ နောကျကနြလေို့ပါ။ သောကွာနဖွေ့ဈတာမို့ သူအလုပျမသှားခငျ ကနြော့ကိုလမျးတဝကျကလာကွို၊ အိမျမှာ အထုတျတှခေပြွီး အယုဒ်ဓယသှားမယျ့ ဘတျဈကားပျေါ တငျပေးခဲ့ပါတယျ။
အယုဒ်ဓယကို ဒုတိယအကွိမျ ရောကျဖူးခွငျးဖွဈပွီး အရငျတခေါကျကအတူလာတဲ့ ကိုသူရိနျနဲ့ကိုစိုငျးကိုပါ သတိရမိတယျ။ ဘတျဈကားဂိတျနားက တုပျတုပျဆရာတယောကျနဲ့ သှားမယျ့နရောတှေ ဓါတျပုံထဲကနေ ရှေး စြေးစကားပွောပွီးတဲ့အခါ ကနြော့ရဲ့ အယုဒ်ဓယ ခရီးစဉျကို အခုလိုစ ဖွဈပါတော့တယျ။
အယုဒ်ဓမှာ လညျလို့ဝတော့မှ ဘနျကောကျကို ပွနျတကျလာခဲ့တယျ။ ဘနျကောကျ ဆိုငျယမျပါရာဂှနျမှာ ကနြော့ကို သူငယျခငျြးက လာကွိုတယျ။ နောကျတနေ့ မှာ ရုံးပိတျရကျတှဖွေဈတာမို့ ကော့ကရိတျဆိုတဲ့ နရောတခုကို သှားဖွဈကွတယျ...
Posted by ywartharlay-ytu at 10:19 AM0comments Links to this post
ကာဝမ်ပူသီ နဲ့ အစိမ်းရောင် ဝင်္ကဘာ
ကာဝမ်ပူသီဆိုတာ မီးတောင်ဟောင်း အဝတခုပါ။ ဆာလဖာနဲ့ ဓါတ်ပြုပြီး အရောင်ပြောင်းနေတဲ့ ရေကန်တခုပေါ့။ ၁၉၈၇ခုနှစ်ကစပြီး ခရီးသွားလေ့လာသူများကို ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဘန်ဒုံကနေ ကီလိုမီတာ ငါးဆယ်အကွာ စီဝီဒီဆိုတဲ့ အရပ်မှာ ရှိတယ်။
မနက်စောစော အိပ်ရာနိုးတာနဲ့ လူတွေ မများခင် သွားကြဖို့ ကျနော်က အတင်းလိုက်တွန်းရတယ်။ အေးတဲ့ရာသီဥတုမှာ ရေနွေးစက်မပါပဲ ရေချိုးရတာ ခပ်လန့်လန့်ပဲ။ ရုံးပိတ်ရက်မို့ ကျနော်တို့ ဧည့်ဆောင်ရှေ့မှာတင် ကားတန်းက ရှည်နေပြီ။ သူတို့ဆီက ဆိုင်ကယ်ငှားပြီး အနွေးထည်နှစ်ထပ်ဝင် တောင်ပေါ်ကို တက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ မြူနှင်းတွေကြားက စီဝီဒီဟာ အလှကြီးလှနေတယ်။
တောင်ပေါ်စခန်းကို ရောက်တာနဲ့ မနက်စာစားကြတယ်။ ဝါလာနီဆိုတဲ့ ဘလက်ကားရမ့် လက်ဖက်ခြောက်ကို စမ်းသောက်တာကြိုက်လွန်းလို့ အိမ်အတွက်ဝယ်လာခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ကျနော့ကို စကားမပြောပဲ လိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီး လက်မှတ်ဝယ်တဲ့ဆီကို ခေါ်လာတယ်။ စကားမပြောပဲနေရင် မင်းက အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ခွဲမရဘူးတဲ့။ အိုကေဆိုပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးလိုက်သွားတာ ဒေသခံလက်မှတ်ဈေးနဲ့ ကာဝမ်ပူသီကို တက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ လက်မှတ်တစောင်နဲ့ နှာခေါင်းစည်း ခပ်ပါးပါးလေး တခုပေးပါတယ်။
၁၀ဒီဂရီ အနားတဝိုက်မှာပဲ ရှိတဲ့ ရာသီဥတုက အေးစိမ့်နေတယ်။ လေကတညှင်းညှင်းတိုက်နေသလို မြူတွေကလည်း အဆုပ်လိုက် ကြဲချနေသလိုပါပဲ။ ကန်ရဲ့ ရေပြင် ဖြူမလို၊ စိမ်းပြာပြာဟာ အက်စစ်ပမာဏ ၀.၅ကနေ ၁.၃အထိရှိသတဲ့။ သူနဲ့ ထိစပ်တဲ့ ကျောက်တုံးတွေ၊ သဲတွေ အားလုံးဟာ ဖြူဖွေးကုန်တယ်။
စစ်ကာလအတွင်းက ဆာလဖာ စက်ရုံတခုရှိခဲ့ပြီး အခုအခါမှာတော့ တူးဖော်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ အကြွင်းအကျန်အနည်းငယ်သာ ရှိတော့တယ်။ ကာဝမ်ပူသီအနီးတဝှိုက်ဟာ အခုအခါ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ရေပူစမ်း အပန်းဖြေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေပဲ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေကြတယ်။
ကာဝမ်ပူသီကနေ ပတန်ဂန်ဆိုတဲ့ ကုန်တွင်းရေကန် တခုကို သွားကြတယ်။ ဒေသခံတွေက ပျော်ပွဲစားထွက်သူတွေ၊ ကန်ထဲမှာ အပျော်စီးလှေသင်္ဘောတွေနဲ့ အတော်လေး စည်ကားတာတွေ့ရတယ်။ ကျနော်ကတော့ စိမ်းနေတဲ့ လက်ဖက်ခင်းတွေ ကြားထဲကနေ ထိုးထွက်နေပြီး အေးမြကြည်လင်တဲ့ ရေကန်ကြီးကို ဒီအတိုင်းပဲ ထိုင်ကြည့်နေမိတော့တယ်။
ဒေစီပန်းတွေဟာလည်း အရိုင်းဆန်ဆန်ပွင့်နေကြတယ်။ စတော်ဘယ်ရီ တွေ ရောင်းနေကြတာလည်း တွေ့ရတယ်။ ပြောင်းဖူး မီးဖုတ်ကို ကျနော်က ထောပတ်နဲ့ပဲ သုတ်စားပြီး၊ သူငယ်ချင်းတွေက ငြုတ်ဆီသုတ်စားကြတယ်။ ငြုတ်ဆီသုတ်စားတာ ကျနော် ပထမဆုံး မြင်ဖူးတာ အထူးအဆန်းပဲ ဆိုလို့ ကျနော့ကို သူတုို့က အံ့သြစရာလေး အဖြစ်ကြည့်ကြတာပေါ့။
ရေကန်က ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါ ကျနော်ဟာ အစိမ်းရောင် ဝင်္ကဘာထဲမှာ တဝဲဝဲလည်နေတော့တယ်။ လှိုင်းဂယက်တွေလို အရစ်လိုက် အတန်းလိုက် အဲ့ဒီ လက်ဖက်ခင်းကြီးထဲမှာ တနေကုန်သာ နေလိုက်ချင်တော့တာ။
ကင်မရွမ်ဟိုင်းလမ်းက လဖက်ခင်းတွေဟာ အခုလို ပုံဖော်ထားခြင်း မရှိဘူး။ ဒီကတော့ အရစ်လိုက် အဝိုင်းလိုက် အစွေလိုက်နဲ့ အဲ့ဒီဝင်္ကဘာထဲမှာ နေခဲ့ချင်တော့တာပါပဲ။
ညနေ နေချိုတဲ့အခါ ကျနော်တို့ ပြန်ဆင်းလာခဲ့တယ်။ ဧည့်ဂေဟာမှာဝင် ပစ္စည်းတွေယူပြီး ဘန်ဒုံကို တခါတည်းပြန်ဆင်းလာကြတယ်။ လမ်းမှာ အခုမှ လာနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ကားတန်းရှည်ကြီးကို မြင်ရတဲ့အခါ ဂျကာတာတင် ကားလမ်းကြပ်တာမဟုတ်ပဲ ဘန်ဒုံမှာပါ ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ ကြပ်တယ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေက ရှင်းပြတယ်။
ညနေစာကို စားလို့ကောင်းတယ်လို့ သူတို့ညွှန်းတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို ရွေးခိုင်းပြီး ကျနော်က သူတို့ ကျွေးခဲ့တယ်။ ဘန်ဒုံက ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ မုန့်တိုက်ကနေ ဒူရင်းသီးပတ်ဖ်တွေ ပူပူနွေးနွေးဝယ်လာတဲ့အပြင် ဘရောင်းနီနှစ်ဗူးလောက်အဆွဲကောင်းတာ လေဆိပ်မှာ ကံကောင်းလို့ ပေါင်ပို မပေးရတယ်။ လက်ဆွဲအိတ်ထဲက လက်ဖက်ခြောက်ထုတ်တွေကို ကင်မရာအိတ်ထဲထည့် ကိတ်မုန့်တွေ လက်ကဆွဲနဲ့အတော်လေး ဖရိုဖရဲ နိုင်တဲ့ အိမ်ပြန်ခရီးဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ပြန်လာတာ နှစ်တွေကြာပြီဆိုသော်ငြားလည်း အစိမ်းရောင်ဝင်္ကဘာက အခုထိ ကျနော့ကို ညှို့ခေါ်ယူနေဆဲ ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်လိုမှ မငြင်းနိုင်တာ အသေအချာပါ......
Posted by ywartharlay-ytu at 6:32 PM0comments Links to this post
ကျောက်ခဲပြတိုက် နဲ့ စီဝီဒီအဝင်
တန်ကူဘန်၊ လက်ဖက်ခင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်
သမိုင်းထဲကမြို့ ဘန်ဒေါင်း (ဘန်ဒုံ)